(tonga teto avy amin'ny Haiti)
I Haitỳ, na Repoblikan'i Haitỳ, dia firenen'ny Antila Be maka ny ampatelo andrefan'ny Nosy Hispaniola (28 km2 eo ho eo). Ny renivohiny dia Port-au-Prince. Niisa 8,3 tapitrisa ny isam-ponina tany Haitỳ tamin'ny 2005.
Lasa repoblika mainty manam-pahaleovantena voalohany izy teo aorian'ny tolom-piavotana haisianina (1791-1803) nitondra ny tafik'i Napoleon Bonaparte niala teo. I Haitỳ irery no firenena miteny frantsay manam-pahaleovantena any Karaiba.
Any andrefan'i nosy ny Hispaniola ny Haitỳ, faharoa amin'ny nosy ngeza indrindra any antily. Fahatelo amin'ny firenena ngeza indrindra ny i Haitỳ, eo arian'ny Repoblika Dôminikana sy Koba. Tendrombohitra fotsiny ny ankabeazan'ny tany any Haitỳ. Ny nosy hafa an'i Haitỳkoa dia :
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Haitỳ&oldid=1012644"
Dernière modification le 8 Jolay 2021, à 07:47
Voaova farany tamin'ny 8 Jolay 2021 amin'ny 07:47 ity pejy ity.